Jannadii dalxiis ee Indooniisiya Bali waxay gashay xaalad adag oo degdeg ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Indho Indho Indoneesiya » Jannadii dalxiis ee Indooniisiya Bali waxay gashay xaalad adag oo degdeg ah
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Indho Indho Indoneesiya • News • jiga • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Dalka Indooniisiya wuxuu hada wajahayaa mid ka mid ah Aasiya ee ugu ba'an ee coronavirus dillaaca, iyadoo tirisa in ka badan 20,000 oo kiis maalin kasta toddobaadyadii la soo dhaafay.
Madaxweynaha Joko Widodo ayaa ku dhawaaqay quful cusub horaantii Jimcaha, oo lagu wado inuu socdo dabayaaqada July, inkasta oo la sii dheereyn karo.
Ciidamada isku dhafka ah waxaa laga filayay inay hubiyaan in xiritaanku uu si wax ku ool ah u shaqeyn doono lana kulmi karo bartilmaameedka.
Ciidamada isku dhafka ah waxay ka kooban yihiin 21,000 oo boolis ah iyo 32,000 oo askari.
Sida laga soo xigtay sarkaal sare oo booliis ah, dowladda Indonesia waxay u direysaa 53,000 sarkaal xayiraadaha dhaqdhaqaaqa bulshada ee deg-degga ah (maxalliga ah ee loo yaqaan PPKM) ee lagu soo rogay Java iyo Bali laga bilaabo 3-da illaa 20-ka Luulyo.
Isbatooraha Guud Imam Sugianto wuxuu sheegay in ciidamada isku dhafka ah ay ka kooban yihiin 21,000 oo boolis ah iyo 32,000 oo askari.
Ciidamada isku dhafka ah waxaa laga filayay inay hubiyaan in gurmadka degdegga ah ee PPKM uu si wax ku ool ah u shaqeyn doono oo uu la kulmi doono bartilmaameedka, ayuu raaciyay Sugianto.
Boqolaal jidgooyooyin iyo isbaarooyin ayaa laga taagay guud ahaan dalka Indonesia iyadoo ay masuuliyiintu isku dayayaan inay meelmariyaan xirxirida adag ee loogu talagalay in lagu xakameeyo faafitaanka COVID-19, oo ku soo batay dalka toddobaadyadii la soo dhaafay.
Tallaabadan ayaa timid waxyar ka dib markii Madaxweynaha Joko Widodo uu ku dhawaaqay xiritaan cusub horraantii Jimcaha, oo lagu wado inuu socdo illaa dhammaadka July, in kastoo la sii dheereyn karo. Amarku wuxuu u baahan yahay dhammaan ganacsiyada “aan muhiimka ahayn” inay albaabada u laabaan, halka ardayda ku saleysan Java iyo Bali ay tahay inay wax ku bartaan guriga haddii ay suurogal tahay. Jardiinooyinka, xarumaha ganacsiga, maqaayadaha gudaha iyo goobaha cibaadada, iyo meelaha kale ee caamka ah, ayaa sidoo kale la xiray.
Dalka Indooniisiya wuxuu hadda wajahayaa mid ka mid ah Aasiya ee ugu ba'an ee coronavirus dillaaca, iyadoo tirineysa in ka badan 20,000 oo kiis maalin kasta toddobaadyadii la soo dhaafay - inbadan oo la rumeysan yahay inay xiriir la leeyihiin Delta Delta duwanaanshihiisii ​​ugu horreeyay ee lagu arkay Hindiya - iyo in kaliya ay xisaabtamaan kuwa lagu xaqiijiyay baaritaanka. Waddanku wuxuu jabiyay taariikhdiisa cudurka maalin kasta 12-kii maalmood ee ugu dambeeyay, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters, oo soo warisay 25,830 xaaladood jimcihii, iyo sidoo kale tiro aad u badan oo 539 dhimasho ah.
Marka la eego BaliCaan ka noqoshada dalxiisayaasha iyo xaaladdeeda dhaqaale ahaan, dadaallada tallaalka ayaa si aad ah diiradda loogu saaray jasiiradda, halkaas oo qiyaastii 71% dadka deegaanka ah laga tallaalay ilaa hadda. Xilliyadii ugu dambeeyay ee kiisaska - oo la arkay 200 maalin kasta - jasiiraddu weli way xiran tahay dalxiiska caalamiga ah, oo ay ku jiraan kuwa daawadayaasha tallaalka leh, oo u oggolaanaya kaliya muwaadiniinta Indonesia iyo kuwa haysta rukhsadaha gaarka ah inay u safraan halkaas. Waxay ku faantaa dad gaaraya 4.3 milyan.